साँधको रुख र बेलायती कानुन ! – News Portal of Global Nepali
1:14 PM | 6:59 PM
22/02/2018 मा प्रकाशित
साँधे कान्लोमा लगाइएको एउटा घाँसे रुखलाई लिएर दाजुभाइबीच झगड़ा र मुद्दामामिला भएको सुन्नुभएको छ ? छिमेकीबीच आलिको रुखलाई लिएर किचलो त परि नै रहन्छ । बेलायतमा चाहिँ साँधको रुखबारे यस्तो रोचक कानुन रहेछ:
१-तपाईंले साँधमा ठूलै रुख पनि रोप्न पाउनुहुन्छ । त्यसको मूल जरो रोप्दाको क्षण तपाईंकै जग्गामा परे भयो । रुखको उचित रेखदेख र सम्भार गर्ने जिम्मा तपाईंकै हुन्छ र तपाईं रुखपति हुनुहुन्छ। तर,
२-त्यो रुखको हाँगा जति सबै छिमेकीको गार्डेनमा गए पनि तपाईंलाई छिमेकीले केही भन्न, गर्न मिल्दैन; रुख तपाईंकै हुन्छ ।
३-छिमेकीको गार्डेनमा फैलिएको हाँगामा फल्ने फल या फूलमाथि पनि हक तपाईंकै हुन्छ । छिमेकीले टिपेर खायो भने चोरी ठहर्छ । तर त्यसलाई टिप्न तपाईं छिमेकीको गार्डेनमा बिनाअनुमति जान भने सक्नुहुन्न । छिमेकीलाई पत्र पठाएर, देखेमा बोलाएर त्यो फल माग्न सक्नुहुन्छ । उसले त्यो दिनै पर्दो रहेछ । यहाँसम्म कि उसको गार्डेनमा हावाले झारेको फलमाथि पनि पहिलो हक तपाईंकै हुँदो रहेछ ।
४-फल्ने फल या फूलमाथि तपाईंको हक़ भए पनि झरेर कुहिने पात र फोहोर सफा गर्ने कामचाहिँ उसैको हुँदो रहेछ । फोहर आफै सफा गर्नुपर्ने तर फलेको फल टिपेर दिनुपर्ने ।
५-छिमेकीले फल खान नपाए पनि आफ्नो सीमाभित्रसम्मका हाँगा काट्ने अधिकार भने राख्दो रहेछ । तर एकातिरको हाँगा काट्दै गर्दा रुख असन्तुलित भएर नलडोस् भन्ने जिम्मेदारी पनि बोक्नुपर्ने रहेछ । यसरी काटिएको हाँगा रुखपति (तपाईं)ले राख्न चाह्यो भने उसैलाई दिनुपर्ने र नचाहे आफैले पैसा तिरेर फाल्नुपर्ने रहेछ । यसरी हाँगा काट्ने र फाल्ने काम निकै महँगो पर्ने हुनाले धेरैले यसबारे सोच्दा पनि रहेनछन् ।
६- तपाईंले साँधमा लगाएको रुख बिसालु भएमा, त्यसको हाँगाले छिमेकीको झ्यालमा छिर्ने घामलाई उल्लेख्य रूपमा रोकेमा या जतिखेर पनि लडेर कसैलाई किच्नसक्ने गरी खतरनाक अवस्थामा पुगेमा भने तपाईंको छिमेकीले त्यो रुख काट्न तपाईंलाई अनुरोध गर्न सक्ने रहेछ । यस्तो अवस्थामा रुखको उचित व्यवस्थापन तपाईंकै जिम्मा हुन्छ । सार्वजनिक सड़क या खेलमैदानतिर गएका हाँगा भने तपाईंले नै काट्नुपर्ने हुन्छ ।
आफैलाई परेपछि यस्तो रोचक नियम थाहा भयो । (ठ्याक्कै कानुनी भाषामा केही तलमाथि हुनसक्ला, मैले आफूले पढ़ेसुनेको तथ्य संश्लेषण गरेको हूँ) ।
अधिकांश युरोपमा यस्तै व्यवस्था रहेछ । हरेकले छिमेकीको किचकिचबाट नडराई आफ्नो बगैँचामा कम्तिमा एउटा रुख भए पनि रोपून् भन्ने यसको उद्देश्य हुनुपर्छ । नेपालको कानुनचाहिँ कस्तो छ कुन्नि ?